Jenezy 27 - Ny Baiboly
Jenezy toko 27
Ny nahazoan'i Jakoba ny tso-dranon'Isaaka - Tso-drano ho an'i Esao - Ny nankanesan'i Jakoba tany Mesopotamia.
1Efa antitra Isaaka ka efa nanjavona ny masony ka tsy nahita intsony. Dia niantso an'i Esao zanany lahimatoa izy, ka nanao tamin'ny hoe: Anaka. - Ary hoy io taminy: Inty aho. 2Dia hoy Isaaka: Hitanao fa efa antitra aho izao; ary tsy fantatro izay andro hahafatesako. 3Koa ankehitriny, alao ny fitaovanao, dia ny tranon-jana-tsipikanao sy ny tsipikanao, ka mandehana any an-tsaha ka mamonoa biby fihaza ho ahy. 4Dia anaovy nahandro tsara ho ahy izany, araka ilay tiako; ka ento aty amiko hohaniko, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao, dieny mbola tsy maty aho. 5Ary henon-dRebekà kosa ny nitenenan'Isaaka tamin'i Esao, zanany; dia lasa Esao nankany an-tsaha mba hiremby haza sy hitondra azy.
6Tamin'izay Rebekà nilaza tamin'i Jakoba, zanany hoe: Izao no reko nolazain-drainao tamin'i Esao, rahalahinao: 7Itondray haza aho, ka anaovy nahandro tsara hohaniko, mba hitsofako rano anao eo anatrehan'ny Tompo alohan'ny hahafatesako. 8Koa ankehitriny, anaka, araho ny teniko amin'izay asaiko hataonao: 9Mandehana mankany amin'ny biby fiompy ka angalao zanak'osy roa izay tsara aho, hanaovako nahandro tsara ho an-drainao, araka ilay tiany; 10dia hoentinao ao amin-drainao izany dia hohaniny, mba hitsofany rano anao, alohan'ny hahafatesany. 11Ary hoy Jakoba tamin-dRebekà reniny: Esao rahalahiko, lehilahy voloina, fa izaho malambo hoditra. 12Angamba hitsapa ahy ikaky ka hoheveriny ho mpamazivazy azy aho, ary amin'izay, ozona fa tsy tso-drano no ho azoko. 13Hoy reniny taminy: Aoka hihatra amiko ny fanozonana anao, anaka. Fa araho ihany ny teniko: mandehàna, angalao zanak'osy roa aho. 14Dia nandeha naka Jakoba, ka nitondra izany tamin-dreniny, nanaovany nahandro tsara araka ilay tian-drainy. 15Ary nalain-dRebekà ny fitafian'i Esao, zanany lahimatoa, ny tsara indrindra, izay tao an-trano, ka nampitafiany an'i Jakoba, zanany lahiaivo. 16Dia nofonosiny tamin'ny hodi-janak'osy koa ny tànany mbamin'ny malambolambo amin'ny vozony. 17Izay vao nataony an-tanan-janany ny nahandro tsara sy ny mofo efa namboariny.
18Dia nankao amin-drainy Jakoba, ka nanao hoe: Dada ô! - Inty aho, hoy Isaaka, iza moa hianao anaka? 19Ary hoy Jakoba tamin-drainy: Izaho no Esao, zanakao lahimatoa. Vitako ny nasainao nataoko ka masìna hianao, miarena ary mipetraha hihinana ny hazako, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. 20Fa hoy Isaaka tamin-janany: Ahoana no dia nahazoanao faingana toy izany, anaka? Ka hoy Jakoba: Iaveh Andriamanitrao no nahatonga azy teo anoloako. 21Manatòna àry, hoy Isaaka, mba hitsapako anao kely, na hianao tokoa no Esao zanako, na tsia. 22Dia nanatona an-drainy Jakoba; ka hoy Isaaka nony nitsapa azy: Ny feony dia feon'i Jakoba, fa ny tànany dia tànan'i Esao. 23Tsy nahalala azy izy, satria voloina tahaka ny an'i Esao, rahalahiny, ny tànany, ka dia nitso-drano azy. 24Hoy izy: Marina tokoa va fa hianao no Esao, zanako? Ary hoy Jakoba: Izaho no izy. 25Dia hoy Isaaka: Arosoy àry hohaniko izato hazan'ny zanako, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Dia naroson'i Jakoba teo anoloany izany ka nihinana izy; ary notolorany divay koa; ka nisotro.
46Ary hoy Rebekà tamin'Isaaka: Boboky ny miaina aho noho ny amin'ireny zanakavavin'i Heta ireny, raha maka vady tahaka ireny Jakoba, amin'ireny zanakavavin'i Heta ireny, amin'ny zazavavy amin'ity tany ity, dia hampaninona ahy intsony izay aina? >